गोर्खाज फाइनान्सको खुद नाफामा ५३२%को छलाङ, रिजर्बको आकार ४६.५६%ले बढ्यो Bizshala -
काठमाण्डौ । प्रमुख वित्तीय सूचकमा प्रगति गर्दै गोर्खाज फाइनान्स लिमिटेडले अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा २०७५/७६ मा खुद नाफामा ५३२.३३ प्रतिशतले छलाङ मारेको छ ।
समीक्षा अवधिमा संस्थाले खुद नाफा ७ करोड १० लाख रुपैयाँ कमाउन सफल भएको छ । अघिल्लो वर्षको यही अवधिमा संस्थाको खुद नाफा १ करोड १२ लाख रुपैयाँमा सीमित थियो । यो हिसाबले संस्था अघिल्लो वर्षको तुलनामा खुद नाफा ५ करोड ९७ लाख रुपैयाँले बढाउन सफल भएको छ ।
अघिल्लो वर्ष ८८ लाख ९६ हजार रुपैयाँमा सीमित सञ्चालन मुनाफामा भारी छलाङ मार्दै संस्थाले यो वर्ष ११ करोड १ लाख रुपैयाँ पु¥याउन सफल भएको छ । अघिल्लो वर्ष २० करोड ९ लाख रुपैयाँ रहेको खुद ब्याज आम्दानी रहेकोमा बढाएर संस्थाले समीक्षा अवधिमा २४ करोड ७१ लाख रुपैयाँको उचाइमा पुर्याउन सफल भएको छ । सञ्चालन मुनाफा र खुद ब्याज आम्दानीमा देखिएको प्रगतिले संस्थाको व्यवसाय विस्तार निकै आक्रामक देखिन्छ ।
संस्थाले अघिल्लो वर्षको तुलनामा ४६.५६ प्रतिशतले वृद्धि गर्दै रिजर्बको आकार ५८ करोड २२ लाख रुपैयाँ पुर्याएको छ । अघिल्लो वर्ष रिजर्बको आकार ३९ करोड ७२ लाख रुपैयाँ रहेको थियो ।
समीक्षा अवधिमा संस्थाले ६ अर्ब ८३ करोड रुपैयाँ निक्षेप संकलन गरी ५ अर्ब १३ करोड रुपैयाँ कर्जा परिचालन गरेको छ । अघिल्लो वर्ष यही अवधिमा संस्थाले ५ अर्ब ५२ करोड रुपैयाँ निक्षेप संकलन गरी ४ अर्ब ४ करोड रुपैयाँ कर्जा परिचालन गरेको थियो ।
संस्थाको प्रतिसेयर आम्दानी ११ रुपैयाँ रहेको छ । प्रतिसेयर नेटवर्थ १४४.४३ रहेको संस्थाको प्रतिसेयर कुल सम्पत्तिको मूल्य ९८८.८८ रुपैयाँ रहेको छ । संस्थाको पीई अनुपात ११ रहेको छ ।
gurkhas finance limited Q4-2075/76
काठमाण्डौ । गत आर्थिक वर्षको चौथो त्रैमासमा आरएसडिसी लघुवित्त...
काठमाण्डौ । कोभिड महामारीबीच पनि ग्लोबल आइएमई लघुवित्त वित्तीय...
मेरो माइक्रोफाइनान्सको नाफा १४५.५१%ले बढ्यो, रिजर्भमा
काठमाण्डौ । गत आर्थिक वर्षको चौथो त्रैमासमा मेरो माइक्रोफाइनान्स...
राष्ट्र बैंकबाट इन्फिनिटीले पायो नेपाल एग्रो लघुवित्तलाई
काठमाण्डौ । नेपाल राष्ट्र बैंकले इन्फिनिटी लघुवित्त र नेपाल एग्रो...
चौथो त्रैमासमा आशा लघुवित्तको आकर्षक प्रगति, नाफा रु. १२.७१
काठमाण्डौ । गत आर्थिक वर्षको चौथो त्रैमासमा आशा लघुवित्त वित्तीय...
साधना लघुवित्तको नाफा १९६%ले बढ्यो, रिजर्भमा ५९४%को छलाङ
काठमाण्डौ । गत आर्थिक वर्षको चौथो त्रैमासमा साधना लघुवि�...
महुली लघुवित्तको नाफा ३५५.१५%ले बढ्यो, ईपीएस कति ?
काठमाण्डौ । महुली लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेडको नाफामा उछाल...
यस्तो छ चौथो त्रैमासमा समता घरेलु लघुवित्तको वित्तीय
काठमाण्डौ । गत आर्थिक वर्षको चौथो त्रैमासमा समता घरेलु लघुवित्त...